Archive du 20170823
Herisetra sy Asan-jiolahy Lasa faritra mena Antananarivo
Mitaintaina andro aman’alina ny mponina eto Antananarivo satria isan’andro dia misy herisetra sy fandrobana mitranga foana.
Marc Ravalomanana “Tsy voafehy ny filaminana raha mbola mahantra ny olona”
Tany Ambanja indray omaly Andriamatoa Marc Ravalomanana, nijery ny zava-misy ka voalohany hita
Vonon-kiady amin’ny HVM Manetsika ny olony Rajoelina
Miketrika sy manomana ny ho avy politikany, indrindra ny fifidianana 2018 i Andry Rajoelina, ka mety tsy hipetra-potsiny intsony na eo aza ny antsojay politika efa nahazo sy mbola mety hahazo azy sy ny ekipany.
Hetsiky ny « Herin’ny Fanovana » Mifanilika andraikitra ny prefektiora sy ny zandary
Azo lazaina ho tratry ny vela-pandrik’ilay vovonana politika Herin’ny fanovana indray ihany koa ny fitondrana Rajaonarimampianina omaly.
Fidinana an-dalambe Tsy tokony hakana alalana, hoy ny Aro Riaka
Efa tamin’ny taona 2015 izahay ato amin’ny Aro riaka, hoy ny filohany, Odon Grégoire Rakotonirina, no nilaza fa tsy misy fahafahana eto na hiteny na haneho hevitra.
Hazo mety hitera-doza eto Iarivo Notapahan’ny kaominina
Miroso amin’ny asa fanapahana ireo hazo lehibe mety hitera-doza ho an’ny mpandalo sy ny trano manodidina ny sampana mpamonjy voina eny Tsaralalàna amin’izao ankatoky ny vanim-potoana hidirana amin’ny lohataona izao.
Mponin’i Mandrosoa Ivato Tsy manaiky ny fanalana sefo fokontany
Manoloana ny resaka fanesorana amin’ny toerany ny sefo fokontany ao Mandrosoa Ivato izay voarain’izy ireo ny faran’ny herinandro dia mivonona ny hanao fitokonana amin’izao fotoana izao ny mponina eny an-toerana.
Rugby tompondakan’Analamanga Nitohy tetsy Malacam indray
Tsy mety misy fifanarahan-kevitra eo amin’ny disadisa misy eo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava ankehitriny.
Sekolin’ny Baolina Kitra TA.FA Hankalaza ny faha-8 taona nijoroany
Hanomboka amin’ny volana oktobra ho avy io ny fifaninanana baolina kitra eny anivon’ny fokontany 60 eto Antsirabe raha ny nambaran-dRandrianarison Olivier filoha sady mpanorina ny SB TA.FA.
Tononkira sisa tsy levona !
Nofofinofy sy zary tononkira tsy lefin’ny vanim-potoana nifanesy sisa ilay voalazan’ny hiram-pirentsika hoe “Ny fitiavanay anao tsy miala, fa ho anao doria tokoa” sy ilay hoe “hiadana sy ho finaritra, he! sambatra tokoa izahay”.
Saosisy karakaraina eny Ikopa Mety hitarika amin’ny fahapoizinana ara-tsakafo
Tranga iray tsy zoviana amintsika intsony ny fanasana tsinain’omby hanaovana saosisy eny amin’ny ranon’Ikopa mandalo eny ambany tetezan’Anosizato sy Ampasika iny.
Angovo azo havaozina tohanan’ny Eoropeanina Tokantrano 9000 no hahazo tombontsoa
Manohana ny fitsimbadihana amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina ny vondrona eoropeanina,
Tontolon’ny varotra Mila mampitombo traikefa i Madagasikara
Mivahiny eto Madagasikara ny delegasionina avy amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny varotra (OMC),
Fokontanin’i Tsiadana Vahiny ireo nanafika ny tanàna, hoy ny sefom-pokontany
Manao sesilany ny fanafihan-jiolahy eto Antananarivo Renivohitra. Ho an’ny fokontany Tsiadana manokana ao anatin’ny Boriborintany faharoa
Fanendahana teny 67Ha 1 voasambotra, 2 tafaporitsaka
Nalaza tato ho ato ny resaka fanendahana sy ny fanafihana anaty taksibe. Voasambotry ny polisy avy ao amin'ny boriborintany faha-7 etsy 67 Ha ny zoma 18 aogositra 2017
Nitangoronan’ny olona ny teratany vahiny iray sy vehivavy Malagasy iray teny Anosy omaly maraina.